राष्ट्रबादी नेपालीको रगत उम्लिने विप्लवको कडा भाषण, मोदीको सातो गयो – All top Here
Home/समाचार/राष्ट्रबादी नेपालीको रगत उम्लिने विप्लवको कडा भाषण, मोदीको सातो गयो
राष्ट्रबादी नेपालीको रगत उम्लिने विप्लवको कडा भाषण, मोदीको सातो गयो | BIPLAP | MOTIVATE
मेरो नाम राजन गिरी हो । मेरो घर भूल्के ५ भोजपुर हाल विराटनगर ४ मा डेरा गरी बस्दै आएको छु । म गरिब परिवारको भएका कारण आफ्नो जिविका चलाउनका लागि मलेसियामा गएर काम गर्न थालेको पनि ११ वर्ष भयो । गरिब भएपनि या जतिसुकै गाह्रो भएपनि घरमा एकजना शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने लागेर मैले मेरो श्रीमतीलाई पढाउने निर्णय गरे र प्लस टु पढाए । प्लस टु पढाएर पनि केही नहुने देखेपछि मैले उनलाई स्टाफ नर्स पढाए ।दिनरात मेहेनत गरेर विदेशी भूमीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले विराटनगरमा कोठा भाडामा लिएर राखेर उनलाई स्टाफ नर्ससम्म पढाए र उनी नोबेल हस्पिटलमा काम गर्न थालिन् ।तर, उनले मलाई धोका दिइन् र मैले पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति लिएर पोइल गइन् । उनले ४ तोला सुन लिएर भागेकी छिन् ।म सबै नेपाली साथीभाई हरूलाई भन्न चाहन्छु की श्रीमतीको सबै कुरामा विश्वास गर्न नहुने रहेछ । मैले किन यस्तो भन्दैछु भने म एक पात्र हुँ जसले यसको ज्वलन्त उदाहरण भोगेको छ ।
मैले बगाएको पसिनाको कमाईमा पढेर काम गर्न थालेकी उनले घर सानो भयो, मलाई जागिरमा जान गाह्रो भयो मोटरसाईकल चाहियो भन्दै मलाई विदेशिन बाध्य बनाइन् । यसक्रममा उनले आफूसँग जोडी नमिल्ने लवाई खुवाई मिल्दैन भन्दै सम्पत्ति कम भएको भन्ने निहुँमा झगडा गर्ने र मलाई फेरी विदेश जान बाध्य बनाएपछि म मलेसिया आएको ११ महिनापछि पोइला गइन् । यता म भने श्रीमतीको पढाई खर्च कसरी पुर्याउने भन्दै कति दिन भोकै बसे, भोकै काम गरे ।तर मेरो उक्त मेहेनत खेर गयो । अहिले अनेक बहाना बनाएर पोइला गइन् । उनको नाम सुमित्रा गिरी हो नागरिकतामा यही छ नाम । म अहिले मलेसियामा छु । उक्त घटनाबारे मेरो बहिनी हिरा गिरीले विराटनगर चौकीमा निवेदन दिएकी छिन् । दाईले विदेशबाट पैसा पठाएर भाउजुलाई पढाउनु भयो स् हिरा गिरी भाउजु र म सँगै डेरा गरेर बस्थ्यौ । दाइले बेदशबाट पैसा पठाएर भाउजुलाई पढाउनु हुन्थ्यो । दाईको बिहे सुमित्रासँग एसएलसी दिएपछि भएको थियो । सुमित्रालाई दाइले नै प्लस टु र स्टार्फ नर्स पढाउनु भएको थियो । नोवेल मेडिकल कलेजमा काम गरेको दुई बर्ष हुन लागेको थियो ।
भाउजु विएसी गर्न भन्दै काठमाण्डौ जानु भयो गत वर्ष मंसिरमा । काठमाडौ गएको केही दिनपछि वहाले फो गरेर आफूले बिहे गरेको बताउनु भयो । त्यसपछि कुनै सम्पर्क भएको छैन् । पढ्न दाइले नै पठाउनु भएको थियो । तर, सम्पर्कमा नआएपछि मैले पुसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मोरङमा मान्छे हराएको भन्दै उजुरी गरे ।यस विषयमा प्रहरीले कुनै जानकारी दिएन । प्रहरी के भन्य ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले गत बर्ष सुमित्रा गिरी हराएको भन्दै खोजी गरिदिन निवेदन परेको जानकारी दिएको छ । सुमित्राको खोजी गर्दा फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ । राजन गिरी हाल रोजगारीका लागि मलेसियामा । नेपाल इन्साइडर बाटअन्य समाचार, गर्भ रहे नरहेको थाहा पाउने पाँचओटा लक्षणहुनत आजभोलि गर्भवती भए नभएको कुरा पत्ता लगाउने अनेक उपाय छन् । प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट प्रयोग गरेर गर्भ यकिन गर्न सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता परीक्षण गर्ने विधीहरु सर्वसुलभ हुँदैनन् । यस्तो बेला कसरी थाहा पाउने आफू गर्भवती भएको कुरा ? आउनुस् जानौं पाच ओटा तरिका ।
१. तपाईं अन्तिम पटक महिनावारी भएको कुरा याद गर्नुहोस् । यदि नियमित महिनावारी हुने गर्नु भएको छ भने तपाईंको महीनावारी हुने दिन नाघिसक्दा पनि महिनावारी हुनु भएन भने तपाईं गर्भवती हुनु भएको छ । २. स्तनको आकारमा परिवर्तन देखिन सक्छ । तपाई)लाई लाग्नसक्छ कि तपाईंको स्तनको मुन्टो केही रसिलो भएको हुनसक्छ । र, स्तनको आकारमा पनि वृद्धि भएको हुनसक्छ । यस्तो भयो भने तपार्इं गर्भवती हुनुभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।३. केही नखाँदा पनि गनाएको जस्तो हुने, हरेक कुरामा गनाएको आभास हुने, वाकवाकी तथा वान्ता नै आयो भने पनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको थाहा पाउन सकिन्छ । ४. दिक्क लाग्ने, दिशापिसाव लागेजस्तो हुने तर नलाग्ने, मुड परिवर्तन भइरहने अर्थात घरी रिस उठ्ने घरी शान्त रहन मन लाग्छ । ५. घरी घरी पिसाव लागिरहने भयो भनेपनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको हुनसक्छ ।यस्ता लक्षणहरु देखिनासाथ गर्भको परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ । श्रीमानले गरे ६ वटी श्रीमतीसँग एकैपटक यौन सम्पर्क, त्यसपछि घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना ! लिवर अर्थात् कलेजोको सम्पूर्ण फोहोर वा खराबीलाई एकपटकमै हटाउने यो गोप्य घरेलु औषधी ! लिवर यानिकी कलेजोले हाम्रो शरीरमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीले जस्तै काम गर्छ।अर्थात् तपाइँ जत्ति पनि बाहिरको जंक फुड, तेलमा तारेको भोजन, जाँड रक्सी र अनेकौं केमिकलयुक्त औषधी लगायतका पदार्थ खाएपनि यी चिजहरु बाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई कलेजोले शरीरबाट बाहिर
निकाल्ने काम गर्छ। भोजन खाएपछी कलेजोले उक्त भोजनबाट आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पुर्याउँछ ।
चार महिना देखि थन्किएका यात्रुवाहक बस सञ्चालन
महेन्द्रनगर जाँदै गरेको रात्रि बस दुर्घटना
–त्रिशुली सडक खण्डमा डिस्पोज गर्ने क्रममा बम विस्पोट